MinnyoMaharsan: Göttingen & Gänseliesel
Göttingen & Gänseliesel
ဂျာမနီက မြို.တွေမှာ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်အသားလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
Göttingen ဆိုတာကတော့ မဟာဆန် german language course တက်ခဲ့တဲ့ မြို.လေးပေါ့။
မြို.ရဲ. အမှတ်အသားကတော့ Gaenseliesl အရုပ်လေးပါ။
အဲဒီမြို.က တက္ကသိုလ်မြို.လေးလေ။ နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတွေ တော်တော်များများး လာတက်ကြတဲ့ တက္ကသိုလ်ပေါ့။ မြို. ကတော်တော် ကျယ်ပါတယ်။ institutes တွေက အများကြီး တစ်မြို့လုံး ပြန့်နေတာပဲ။ အဲဒီမြို.မှာနေတုန်းက ညဖက်ဆိုလဲ အပြင်ထွက်ရဲတယ်။ ဘယ်နေရာသွားသွား ကျောင်းသားတွေချည့်ပဲလေ။ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိဘူးပေါ့။
Göttingen မြို.မှာ Gänseliesel ရုပ်တုလေးနဲ.အတူ ထူးဆန်းတဲ့ အလေ့အထလေးရှိပါတယ်
Göttingen University က Ph.D ဘွဲ့ရတဲ့သူဟာ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှာ Gaenseliesl ရုပ်တုလေးကို နမ်းရပါတယ်ရှင်။
မဟာဆန်လည်း မြို.ထဲသွားရင်း ဘွဲ့ရတဲ့သူတွေ လာကြတာ ကြုံဖူးပါတယ်
Posted by မဟာဆန် at 9:48 PM
ဂျာမနီကိုမရာက်ဘူးပေမယ့် ရောက်နေသလို ခံစားရပါတယ် အစ်မ